किन भईहेको छ ‘नेपाल आईडल’को चौतर्फी आलोचना ? आयोजकले दियो फेरि उल्टै धम्की ! | Emedia Hub UK
Home Entertainment किन भईहेको छ ‘नेपाल आईडल’को चौतर्फी आलोचना ? आयोजकले दियो फेरि उल्टै धम्की !
Posted By: Prakash Raion: September 04, 2017 In: Entertainment, नेपाल समाचारNo Comments
प्रकाश/काठमाडौं – अमेरीकामा सन् २००२ जुन महिनाको ११ देखि सुरुवात भएको अमेरीकन आईडल २००४ मा भारतमा आएर ईण्डियन आईडलको रुपमा संचालन भएको थियो ।
इन्डियामा भएको पहिलो आईडल अभिजित सावन्त हुन् भने तेस्रो आईडल नेपाली मुलका गायक प्रशान्त तामाङ्ग हुन् । अन्नपुर्ण टेलिभिजनले नेपालमा नेपाल आईडलको रुपमा अहिले कार्यक्रम गर्दै आईरहेको छ ।
टेलिभिजनमा प्रसारित सांगितिक प्रतियोगिता चर्चित रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’को विषयमा लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । केहि चर्चा सकारात्मक भन्दा बढि नकारात्मक, आलोचनात्मक टिप्पणीहरु हुने गरेको छ ।
एपीवान टेलिभिजनबाट प्रशारित प्रतियोगिता नेपाल आईडललाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरुमा शुरुवात देखिनै विवादित् बनेको यो कार्यक्रम पछिल्लो पटक भने झनै विवाद चुलिएको हो ।
शुक्रबार बेलुकी प्रशारण भएको रियालिटी शोको अन्तिम ४ मा निशान भट्टराइ, प्रताप दास, सागर आलेमगर र वुद्ध लामाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
तर यो हप्ता कोही पनि प्रतिस्पर्धी बाहिरिएका छैनन् ।
निर्णायकले दर्शकलाइ अझै सोच्ने समय दिने भन्दै यो साता कोहीलाइ पनि आउट नगर्ने बताए ।
आफूहरुसँग बाँकी रहेको एउटा मात्र पावर प्रयोग गर्दै कोहिलाइ पनि आउट नगर्ने निर्णायकले घोषणा गरका हुन् ।
यसैले यो साता चारै जना प्रतिस्पर्धी सुरक्षित रहेका छन् ।
‘नेपाल आइडल’मा न्ह्यू बज्रचार्य, कालिप्रसाद बाँस्कोटा र इन्दिरा जोशी निर्णायकको रुपमा रहेका छन् ।
कुनै पनि भागमा दर्शकले पठाएका कुल भोट संख्या सार्वजनिक गरिएको थिएन तर, यो साता भने ३७ लाख २० हजार २ सय १८ भोट प्राप्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।
‘नेपाल आइडल’को पहिलो संकरणको फाइनल कतारमा आयोजना हुनेछ ।
सेप्टेम्बर २२ मा यो प्रतिस्पर्धाको फाइनल हुनेछ ।
आईडलमा जर्जले गरेको निर्णय र भोटिङको सवाललाई लिएर विवाद हुने गरेको पाईएको छ । शुरुमा सामाजिक सञ्जालहरुमा आईडलको लागि जर्जहरुले राम्रो गाउनेलाई भन्दा पनि राम्रो कपडा लाउने राम्री देखिनेहरुलाई छनौट गरेको जस्ता अरोप प्रत्यारोपहरु निकै नकरात्मक चर्चा भए ।
त्यसपश्चात भोटिङ राउण्डमा आईरहदा भोट आएको आधारमा नभई जर्ज, आयोजकले आफ्नो मनोमानी ढंगबाट प्रतियोगिताको नियमविपरित आफुलाई मन परेकोलाई मात्र छनौट गर्दै अगाडी बढाएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भए ।
यो कार्यक्रमले अन्तिम प्रतियोगी छनोटका लागि खुल्ला गरेको भोटिङको अवसरमा आयोजकले पैसाको खेल खेलेको आरोप सर्वसाधारणले लगाउँदै आएका छन् ।
आइडलका संचालक तथा आयोजकलाई सर्वसाधारणले एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा पैसाको खेल भएको, निर्णायकले प्रतिभा भन्दा पनि पैसा हेरेको र क्षपतावान प्रतियोगीलाई आइडलबाट बाहिर राखेको, जर्जले पनि निष्पक्ष भन्दा पनि आयोजकको चहाना पुरा गरेको जस्ता आरोप नेपाल लगाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रमका संचालक, निर्माण कम्पनि तथा जर्जलाई बिभिन्न शब्द मार्फत ब्याङ्ग्यात्मक तरिकाले उडाइरहेका देख्न सकिन्छ ।
कार्यक्रम तथा कार्यक्रम निर्माण कम्पनी प्रति सामाजिक संजालमा सक्रिय सर्वसाधारणलाई आयोजकले कारबाहिको धम्की दिएको छ ।
आईडलका आयोजकले भने आफ्नो आधिकारीक पेजमा स्टाटस लेख्दै कार्यक्रम र कार्यक्रमका आयोजक र जर्ज प्रति जथाभाबी शब्द प्रयोग गरेर सामाजिक संजालमा उडाउनेलाई कारबाहि गर्ने धम्की दिएको छ ।
आईडलका आधिकारिक पेजमा रहेको स्टाटस जस्ताको तस्तै :
१. जे गरिएको छ, शोको नियमको अधीनमा रहि शोको लाईसेन्स दिनेले भनेअनुसार गरिएको छ। अमेरिकन वा ईन्डियन अाईडलमा जे हुन्छ, नेप…
Posted by Nepal Idol on Sunday, September 3, 2017
अहिलेसम्मकै बढी ८८ किलो सुन समातियो (फोटो फिचरसहित)